ကျနော်တို့အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မည်! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ကျနော်တို့အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မည်!
22 / 03 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, IETT, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Institute, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ဥက္ကPresident္ဌ Ekrem Imamoglu က "ကျနော်တို့အတူတူအောင်မြင်မှာပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်အစ္စတန်ဘူလ်နေထိုင်သူများ၊ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနေထိုင်သူများအားသူတို့၏အိမ်တွင်နေထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်သမ္မတ၏စကားများကိုဘတ်စ်ကားများ၏ခြေကုပ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မည်။
အက်စ်ကမ်မက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ် (BB) ၏မြို့တော်ဝန်အီခရမ်မိုမိုဂူသည်မွန်းတည့်ချိန်၌sksküdarတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခမ်းအနားအပြီးတွင်Saraçhaneရှိဗဟိုအဆောက်အအုံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူ၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်amomamoğluသည်ကင်မရာများရှေ့သို့ရောက်ခဲ့သည်။ amomamoğluဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များနှင့် BBB TV များမှသူ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိလူများအတွက်အရေးကြီးသောသတင်းစကားများပေးခဲ့သည်။ “ ဒီကနေ့ငါdarsküdarကိုသွားပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအသိမပေးပဲsiteSKİအတွက်Üsküdarအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းခွင်ကို site မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ လမ်းများယခင်ကထက်ပိုမိုသီးခြားခဲ့ကြသည်ရင်တောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလူနေဆဲရှိခဲ့သည်။ ဒါလုံးဝမှားတယ် ဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့ သင့်ရဲ့လသာဆောင်ပေါ်မှာထိုင်ပါ မင်းရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကိုဖွင့်ပြီးသင့်အိမ်ကိုလေဝင်လေထွက်စေပါ။ အထူးသဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်areasရိယာများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်အပြင်သို့ထွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းကိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုအောက်သို့ကျရောက်စေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အသက် ၆၀ နှင့်အထက်ရှိနိုင်ငံသား၊ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့စကားကိုနားထောင်ပါ
“ ကလေးများ၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်သို့ဆွဲချခြင်းကိုရွေးချယ်လိုက်သည်”
“ ချစ်လှစွာသောသားသမီးတို့၊ မင်းအိမ်မှာပျင်းနေတယ်ထင်တယ် ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းကစားခွင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလျစ်လျူရှုမထားနဲ့။ စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ရအောင်။ ငါတို့အဖွားတွေအဘိုးအဘွားတွေကိုခဏမဖက်ရအောင်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီနေ့မင်းကိုစိတ်ဆိုးမနေစေချင်ဘူး ကျနော်တို့အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မယ် '' ဟုပြောသည် အတူတူအောင်မြင်ဖို့; ငါတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ရမယ်၊ ငါတို့အတူတူကြိုးစားကြရမယ်။ ဟုတ်ကဲ့; ခဏတာအသက်ကြီးလာတဲ့ငါ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်မှာပျင်းလာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ ဒီနေ့ငါတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မခံပါနဲ့၊ အခုနေပေးပါ ငါနင့်ကိုချစ်တယ် ငါတို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ မင်းတို့လက်တွေနင့်ကိုငါနမ်းတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းများကိုလူငယ်ထံသို့လက်ခံရရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် ယောက်ျားတွေ၊ မင်းရဲ့နင့်မျက်လုံးတွေကိုငါနမ်းတယ် အားလုံးကျန်းမာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ။ ကျနော်တို့အတူတူအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ "
ETBB ဥက္ကDirector္ဌ Erkem amomamoğlu၏“ ငါတို့အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မယ်” ၏သတင်းစကားအပြီးတွင် IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှစီးနင်းလိုက်ပါလာသောဘတ်စ်ကားများ၏ခြေလှမ်းများတွင်“ ငါတို့အတူတူအောင်မြင်လိမ့်မည်” ဟူသောသတင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ဘတ်စ်ကားများအတွင်းလျှောက်လွှာကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးချဲ့လိမ့်မည်။
ကတ္တရာ Burdur မြို့တော်ဝန်အလုပ်သမားများယိုဖိတ်ခဲ့ပါတယ်အတူတကွနှင့်အတူ
သမိုင်းဝင် site ကို garla တလျှောက်ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်
ကျနော်တို့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Master Plan ကိုအတွက် Lau ဝှမ်းအတူတကွအကဲဖြတ်ရပါမည်
ရေလက်ကြားကိုကူးတလျှောက် Marmaray'l2မိနစ်လျှော့ချပါလိမ့်မည်
မြောက်အမေရိက Aegean ဆိပ်ကမ်းမီးရထားဂံနှင့်အတူ Up ကိုလာမယ့်
ရွှေချိုမက်ထရိုတံတားဆောက်လုပ်ရေးယူနက်စကိုနှင့် ICOMOS အရာရှိများနှင့်အတူတကွအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်
၂၀၁၃ ခုနှစ်အကုန်တွင် Ankara-Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကို Marmaray နှင့်စတင်ခဲ့သည်။
တင်ဒါကြေငြာချက် - ကိရိယာပုံး ၁၀ ခု (ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Lok
တင်ဒါကြေငြာချက် - ၅ ရာခိုင်နှုန်းသိုလှောင်ထားသည့်အလွန်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတစ်စင်း ...
ဝန်ကြီးYıldırım: xnumx't တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားအတူတကွ Marmaray'l ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
အီရန်နှင့်ခကျြ TCDD '' အလုပ်အတူတူ '' အဆိုပြုလွှာကို
ဝန်ကြီး Turhan ကြေငြာခဲ့သည်! အိမ်မှာသူမန်ဆောင်မှုများစီးပွားရေးကျော်မှာတူရကီ Stay အင်တာနက်ပေါ်တွင်
စက္ကူငွေကို ATM ထဲ၌ကူးစက်စေသည့်စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်